မန်ယူရဲ့အရှုံးနဲ့ အပြန်လမ်း၊ မန်စီတီးရဲ့ အနိုင်ထဲကအရှုံး | ဧရာဝတီ
မန်ယူရဲ့အရှုံးနဲ့ အပြန်လမ်း၊ မန်စီတီးရဲ့ အနိုင်ထဲကအရှုံး
မောင်လင်းဝေ| December 8, 2011 | Hits:231
0 | | ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် နောက်အဆင့်မှာ ဆက်လက် ကစားဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ အသင်းတွေမှာ အင်္ဂလန်က အာဆင်နယ်၊ အီတလီက အင်တာမီလန်နဲ့အေစီမီလန်၊ စပိန်က ဘာစီလိုနာနဲ့ရီးရဲယ် မက်ဒရစ်၊ ဂျာမဏီက ဘေယန်မြူးနစ်။ ဆိုက်ပရပ်က အပိုနီတိုးရှား၊ ရုရှားက ဇင်းနစ်၊ ဟော်လန်က အေဂျက် စတဲ့ အသင်း (၉) သင်းက အုပ်စုလိုက် ဇယားထိပ်တွေမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် နောက်တဆင့် တက်ခွင့်ရပြီးတဲ့ အသင်းတွေလို့ ပြောရမှာပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဘေဆယ်ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ ဘောလုံးလုနေကြတဲ့ မန်ယူအသင်းက နာနီ နဲ့ ဘေဆယ်အသင်းက ဂျိုဟိုပတ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နဲ့၈ ရက်နေ့ တွေမှာ ကစားခဲ့ကြတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့် အဆုံးအဖြတ် နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာ ဖိအားတွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေ နဲ့အင်္ဂလန် ကလပ်သင်းတွေဟာ ကစားကြရပါတယ်။ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ရုန်းကန်ခဲ့ကြတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းတွေထဲက ချဲဆီး၊ မန်ယူ၊ မန်စီတီး အသင်းတွေထဲမှာ ချဲဆီးအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဒရော့ဘာ နဲ့ယာမီရီ တို့ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ဗလင်စီယာကို ၃ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် တဆင့် တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ကျန် ၇ ပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ နည်းပြဖာဂူဆန်ရဲ့မန်ယူနဲ့မန်စီနီရဲ့ မန်းစီးတီးတို့ ဟာ ဖိအားပေးမှုတွေကို ချေဖျက် ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အဝေးကွင်းတွေမှာ ယဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ မန်ယူအသင်းဟာ ဘေဆယ်ကို အဝေးကွင်းမှာ ၂း၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် နည်းပြ ဖာဂါဆန် အပါအ၀င် မန်ယူပရိသတ် ခံပြင်း ဒေါသထွက်ကြရပါတယ်။ ဘေဆယ်အသင်းဟာ မားကိုစတယ်လာ နဲ့ အလက်ဇန္ဒားဖာရီတို့ နှစ်ဦးရဲ့ အနိုင်ဂိုးတွေကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာ ထိပ်ကနေ ဦးဆောင်ကစားနေကျ အသင်းကြီး မန်ယူကို အနိုင်ယူလိုက်ပြီး ၁၆ သင်း အဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ ဘေဆယ်အသင်းရဲ့ သမိုင်းမှာ ဒီအဆင့်ကိုရောက်တာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အခုလို မန်ယူအသင်း ဒီအဆင့်က ထွက်သွားရတဲ့အတွက် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အစဉ်အလာရှိတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းတွေ နေ၀င်တော့မှာလားလို့မေးခွန်း ထုတ်စရာ၊ ဝေဖန်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ မန်ယူက အိမ်ရှင် ဘေဆယ်အသင်းကို ဖိ ကစားထားပေမဲ့ အိမ်ရှင်အသင်းရဲ့ ခံကတုတ်စည်းကို မဖောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘေဆယ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ခုခံဖျက်ထုတ်တာတွေ လျော့လျဲပြီး မန်ယူရဲ့တိုက်စစ်ဟာ မမြှင့်တင်နိုင်ဘဲ ဘောလုံး ဆုံးရှုံးမှုတွေသာ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဖီလ်ဂျုံးစ်က တဂိုး သွင်းပေးပြီး မန်ယူအသင်းကို မျှော်လင့်ချက် ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အင်မတန် နောက်ကျသွားပြီမို့ အရှုံးရလဒ်နဲ့နောက်ကြောင်း လှည့်ခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၀၅- ၂၀၀၆ ရာသီက စလို့ ဒီတကြိမ်ဟာ ၁၆ အသင်း အဆင့်ကို မတက်နိုင်တာ မန်ယူအတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်က “ဘယ်လို ခံစားရမှန်းမသိအောင် စိတ်ပျက်ရပါတယ်ဗျာ” လို့ ဆိုရတဲ့အထိ ညည်းတွားခဲ့ရတဲ့ မန်ယူအတွက် သမိုင်းဝင် ရှုံးနိမ့်မှုပါ။ ဒီအတွက် ပရီမိးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲကိုပဲ အာရုံစိုက်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပြိုင်ပွဲ အစဉ်အလာကောင်းတွေ၊ ရလဒ်ကောင်းတွေရှိတဲ့ အသင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘေယန်မြူးနစ်ကွင်းမှာ ကစားရတဲ့ မန်စီတီး အသင်းဟာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်၊ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရမဲ့ အကျပ်အတည်းများနဲ့မန်စီတီး ဆိုတာရယ်၊ ဥရောပရဲ့ အကောင်းဆုံး ၁၆ သင်းမှာ မန်စီတီး ပါလာမလား ဆိုတဲ့ မီဒီယာက အသံတွေဟာ နည်းပြမန်စီနီအတွက် သတိပေး သံချောင်းခေါက်သံတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မန်စီတီးအတွက် အခွင့်အလမ်းတခုကတော့ ဘေယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ ဒီပွဲမကစားမီ အုပ်စု (က) မှာ ၇ မှတ် ၁၀ မှတ် နဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေတဲ့အတွက် အရံတွေကို ထုတ်သုံးပြီး သရေလောက်ပဲ ကစားမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ယှဉ်ပြိုင်ကစားတဲ့အခါမှာတော့ ထင်ထားတာထက် မန်စီးတီးဟာ တိုက်စစ်နဲ့တောက်လျှောက် ဖွင့်ကစားပြီး ဘေယန်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးဗားလ် (၃၆ မိနစ်)၊ တိုရေး ( ၅၂ မိနစ်) တို့ ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ဘေယန်ကို အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ နာပိုလီကလည်း ဗီလာရီးရဲကို (၂းဝ) နဲ့နိုင်လိုက်တဲ့အတွက် မန်စီတီးဟာ ဥရောပ အကောင်းဆုံး (၁၆) သင်းမှာ မပါနိုင်ဘဲ ကျန်ခဲ့ရပါပြီ။ မန်ယူ မန်စီတီး (မြို့ ခံ ၂ သင်း) ရဲ့ ရလဒ်တွေဟာ မန်ချက်စတာမြို့ သားတွေ အတွက်တော့ ကြေကွဲ၍ မဆုံးနိုင် ဖြစ်ကြမှာ သေချာလှပါတယ်။
၂၀၁၂ ဇွန်လမှာ ကျင်းပမယ့် ယူရို ၂၀၁၂ ဥရောပ ချန်ပီယံ ဗိုလ်လုပွဲအတွက် အုပ်စုတွေ မဲနှိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အုပ်စု (က) မှာ ပိုလန်၊ ဂရိ၊ ရုရှား၊ ချက်။ အုပ်စု (ခ) မှာ ဟော်လန်၊ ဂျာမဏီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဒိန်းမတ်။ အုပ်စု (ဂ) မှာ စပိန်၊ အီတလီ၊ အိုင်ယာလန်၊ ခရိုအေးရှား။ အုပ်စု (ဃ) မှာ ယူကရိန်း၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဆွီဒင်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
စပိန်နည်းပြ ဒဲလ်ဘော့စကီးက ယူရို – ၂၀၁၂ ဗိုလ်လုပွဲစဉ်မှာ ဂျာမဏီအသင်းနဲ့ တွေ့ချင်တယ်၊ အီတလီအသင်းဟာ ခက်ခဲတဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမယ်လို့ သုံးသပ် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အီတလီ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ အဘီတီက လက်ရှိချန်ပီယံ စပိန် နဲ့ စောစောစီးစီး ဆုံတွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်လို့ တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အုပ်စု (ဃ) မှာပါဝင်တဲ့ အင်္ဂလန်ဟာ ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်နဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အုပ်စု (ခ) ကတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် မရဏအုပ်စုလို့ သတ်မှတ်ထား ကြပါတယ်၊ အုပ်စု (က) မှာ ပါဝင်တဲ့ အသင်းတွေကတော့ ခြေမကွာတဲ့ အတွက် ကစားပွဲတွေကရမယ့် အဖြေကို စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
လီဗာပူးလ်ရဲ့ ၂၀၁၁ အတက်အကျများ
အာဆင်နယ်ကို ဂိုးပြတ်သွင်းတဲ့ အေစီနဲ့ ခြေစွာဆဲ ဘာစီလိုနာ
မြန်မာ လူငယ်အသင်း အာရှ အသက် ၂၂ အောက် ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်
လီဗာပူး ဂန္ထ၀င်ကစားသမားကြီး ဂျွန်ဘန်းစ်နဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံး အနာဂတ်
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website P.T.A December 9, 2011 - 11:06 am	Man City didn’t play their last game away from home, and Ajax Amsterdam from Holland didn’t qualify either. I think it’s better for the writer to get his/her facts right to respect the readers. This article is not something difficult to compose.